China Yakakosha mapepa noodles ane bowknot akajeka mapepa bhegi chipo bhokisi rakagadzwa Vagadziri uye Fekitori | Yuxingyua
Chakareruka chipo bhokisi
Basa rezvipo mabhokisi
Chimiro, chakasarudzika chitarisiko chinogona kuputira zvinhu, uye bhokisi rekunze rekurongedza rinoshongedza uye rinopa zvinhu.
Yechipo bhokisi chipo chinoshanda kurongedza chakashongedzwa nechinangwa chikuru chekupa zvipo kuhama neshamwari kuratidza rudo. Iko kuwedzera kwekushanda kweiyo nzira yekupakata uye zvido zvemagariro. Chipo mabhokisi ndiko kuratidzwa kwemoyo wedu. Zvipo zverudo zvatinoita isu pachedu kana zvigadzirwa zverudo zvatinotenga, pasina zvakasarudzika, zvinoda kurongedzwa kunogona kuratidza zvinoitika, kungave kudanana, kana kusinganzwisisike, kana kushamisika, kana kuvhunduka, kana uchinonoka Kuivhura zvishoma nezvishoma kwakafanana nekuvhura dondo rakavanzika mumoyo mako uye uchimuratidza pfungwa dzakasiyana dzaunoda kutaura. Izvi ndizvo zvinoreva bhokisi rezvipo.
Mesh yakashongedzwa pamusoro chipo chipo
Yakasarudzika zvipo mabhokisi ane uta mune akasiyana mavara chipo
Pfungwa nyowani yechipo bhokisi
Chipo bhokisi rinouya kubva kuna Goffret cadeau muFrench uye Giftbox muChirungu
Iyo inozivikanwa kwazvo mazuva ano.
Pfungwa nyowani yekupa zvipo. Chipo bhokisi harisi chairo chigadzirwa, asi 15-20 makadhi. Kadhi rega rega rinomiririra rudzi rwechiitiko chevaraidzo, icho chinosarudzwa nemunhu ari kugamuchira bhokisi rezvipo zvinoenderana nezvavanoda. Pfungwa iyi yakaunzwa kuChina kubva kunyika dzekuEurope dzakaita seFrance neBelgium. Makambani emabhokisi echipo akagadzirwa munzvimbo yakaoma anosanganisira French Danlanshe uye Bhokisi Zvipo, izvo zvine mikana mikuru yemusika.
Zvakasiyana nezvipo zvechinyakare, yakasarudzika yakasarudzika yezvipo bhokisi bhokisi inoteedzana yakanyatsosarudzwa mafaro akasiyana siyana uye masevhisi, uye izvo zvinoratidzwa chiitiko chakasiyana uye chinoshamisa. Kazhinji, iyo yakasarudzika yakasarudzika yezvipo bhokisi bhokisi ine diki uye inoyevedza chitarisiko. Bhokisi rega rega rezvipo rine kadhi rakanaka kana bhuku rekuzvisarudzira, iro rinomiririra mabhizimusi gumi nemaviri nemasevhisi avo. Anogamuchira anogona kusarudza zvakasununguka sevhisi yaanoda. Iko zvakare kune ruzivo kadhi rinoshandiswa kuratidza kuzivikanwa uye zviitiko zvebhuku, nazvo kuverenga uye kunakidzwa neruzivo rwemahara.
Inesarudzo yekusangana neruzivo chipo bhokisi rakazvarwa muFrance muna2003. Munguva pfupi yenguva, chave chinhu chakakurumbira chinopa zvipo mumusika weEuropean, uye zvishoma nezvishoma chakapararira kuenda kuJapan, Brazil, United States, Australia, nezvimwe. semuenzaniso, dakotabox muFrance nekambani yeFrance Danlanshe, iyo ichangopinda mumusika weChinese mainland, inopa zviitiko zvekuzorora nehunhu hweFrance uye zvinopa vatengi ruzivo runofadza uye rwunofunga nezvebasa.
Chiedza bhuruu yakasarudzika chipo bhokisi
Yakasarudzika Kudhinda, jira rakanaka rekuchengetedza bhokisi
Pashure: Yakasarudzika dehwe ruvara neakajeka pepa bhegi chipo jewelry jewelry bhokisi rakaiswa
Zvadaro: Yakasarudzika pearlescent Ruvara pamusoro akasiyana embossed jewelry chipo bhokisi rakaiswa
Customized nedehwe ruvara nemasango bepa b ...
Customized pearlescent ruvara pamusoro siyana em ...